Maddi balaa ibiddaa Naqamtee qoratamaa jira - BBC News Afaan Oromoo
13 Waxabajjii 2018
Madda suuraa, Waajjira Fayyaa Godina Wallagga Bahaa/Feesbuukii
Waajjira Eegumsa Fayyaa Godina Wallagga Bahaa
Balaa abiddaa magaalaa Naqamtee waajjira Eegumsa Fayyaa Godina Wallaga Bahaarra dhaqqabeen qabeenyi hedduun barbadaa'eera.
Balaan kun dilbata halkan keessaa naannoo sa'a saddeetii kan dhaqqabe yoo tahu abiddicha to'achuuf sa'aatii afurii ol fudhateera.
''Balaa Kanaan ragaaleen waajirichaa haalaa guutummaa guutuun jedhamuu danda'uun manca'eera, fakkeenyaaf waan akka labsii, daambii fi qajeelfamaa akkasaumas xalayaan baasii fi galii ta'aan manca'aniru'' jedhan I/G Eegumsa Fayyaa Godinaa Wallaga Bahaa obbo Sonaan Dassaaleny.
Waajjirichi Hospitaala Riferaalaa Naqamtee waliin wal qabatee waan jiruuf balaan kun yeroo dhaqqabu dubartootni dahanii ciisanii fi ciniinsuurra turan akka gara kutaa biraatti jijiraman taheera.
Qeerroon magaalichaas balaan kun gara Hospitaalaatti akka hin babal'anneefi lubbuu namoota dhukkubsatanii oolchuuf shoora olaanaa taphataniiru.
Sababni balaa kanaa qoratamaa jiraachuu kan himan Itti Gaafatamaan Qajeelcha Poolisii Magaalaa Naqamtee Komaandar Geetaachoo Ittaanaa sanadoota balleessuuf itti yaadamee kan godhamedha odeeffannon jedhu jiraachuu himaniiru.
''Fayyaa wajjin waan wal qabatu sanadoota dhoksuudhafi, bajata HIV fi Piroojektoota biroo nyaachuufi akkasumas namoota sadarkaa garaagaraarra turanii fi haaromsa kana keessatti warra dallaneedhas jedhama'' jedhu Komaandar Geetaachoon.
Wajjirri gubate kun maallaqa deeggarsaan argameen akka ijaaramee ture kan himamu.
Godinicha jala aanoleen 17 kan jiran yoo tahu ragaaleen hospitaalotaa,fi tajajiloota fayyaa aanolee Godinaan qabamanii barbadaa'eera.
Qorattootni balaa abiddaa komishinii poolisii oromiyaarraa ramadamuun qorannoof magalicha galaniiru. Bu'aa qorannoosaanii boodas sababni balichaa erga baramee dhimmotni itti gaafatamummaatti nama geessan yoo jiraatan seeraan akka ilaalamus komaandar Geetaachoon himaniiru.
19 Ebla 2021
Dargaggoo sababii balaa konkolaataan kallattiin jireenyaa isaa geeddarame
Ijoollee Booranaa-Keeniyaa wallaansoon jireenya horsiise-bulaa qabxiin caalanii argamuu hin dhorkine